Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Laga Waayay Bur & Miciishada oo Sare usii kacaysa.
Itoobiya oo Laga Waayay Bur & Miciishada oo Sare usii kacaysa.
Posted by Dulmane	/ April 30, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in guud ahaan wadanka gumaysiga laga waayay raashinka burka ama daqiiqda looyaqaano, kaas oo ah cunto wadanka gumaysiga Itoobiya aad looga tixgaliyo.
Sida xogta aan kuhelayno halka xabo ee rootiga ah ayaa magaalada Addis Ababa kagaadhay kudhawaad 2 bir oo lacagta Itoobiya ah, taas oo kadhigan qiimihii ugu sareeyay ee abid uu gaadhay rootigu (furinku) waxaana lasoo sheegay in burku uu wadanka gabaabsi ku noqday.
Burka gabaabsiga kunoqday Itoobiya ama lawaayay ayaa lagu macneeyay dhaqaalaha wadanka Itoobiya ee dhulka galay iyo waliba lacagihii adkaa ee bangiyada wadanka laga waayay, waxaana lashgayaa in gabi ahaanba ay wadanka cunadu kaqaaliyowday.
Dhinaca kale qaylo dhaan xoogan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Arbaminj ee Gobolka Shucuubta Koonfureed, halkaas oo laga soo sheegayo isku dhac balaadhan oo udhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidanka Agaziga looyaqaano ee dhaqanka xun.
Isku dhaca shacabka iyo ciidanka wayaanaha oo aad usii xoogaystay ayaa lasheegayaa in uu yimid kadib markii xukuumada wayaanuhu ay xoog iyo shan cad kula wareegtay dhul aad ubalaadhan oo dad shacab ah ay lahaayeen, kaas oo sida lasheegay laga iibsaday shirkado.
Arintan ayaa u’eg talaabadii ay xukuumada wayaanuhu qaaday sanadkii 2015, ee lagu sheegay in magaalada Addis Ababa lagu balaadhin doono, taas oo keentay kacdoono aad ubalaadhan oo guud ahaan wadanka gilgilay.
Wixii war ah ee Arbaminji iyo guud ahaan wadanka gumaysiga kasoo kordha kala soco ONA.